Ch 10 Matthew – 2trondro
Home / Baiboly / Filazantsaran'i Matio / Ch 10 Matthew
10:1 Ary Jesosy niantso ny roa ambin'ny folo lahy miara-mpianany, dia nanome azy fahefana hamoaka fanahy maloto, nanipy azy nivoaka sy hahasitrana ny aretina rehetra sy ny kilema rehetra.
10:2 Now the names of the twelve Apostles are these: the First, Simon, who is called Peter, ary Andrea rahalahiny,
10:3 Jakoba, zanak'i Zebedio, and John his brother, Filipo sy Bartolomeo, Thomas and Matthew the tax collector, ary Jakoba, zanak'i Alfeo, and Thaddaeus,
10:4 Simon the Canaanite, ary Jodasy Iskariota, ilay namadika Azy.
10:5 Roa ambin'ny folo lahy ireo dia nirahin'i Jesosy, mampianatra azy ireo, nanao hoe:: "Aza nandeha tamin'ny lalana mankany amin'ny jentilisa, ary aza miditra ao amin'ny tanànan'ny Samaritana,,
10:6 fa raha tokony mankany amin'ny ondry izay lavo ho afaka tamin'ny taranak'i Isiraely.
10:7 Ary nivoaka, Torio, nanao hoe:: 'Fa ny fanjakan'ny lanitra Efa mby akaiky.'
10:8 Hanasitrana ny marary, atsangano ny maty, diovy ny boka, namoaka demonia. Efa nahazo maimaim-poana, dia manome maimaimpoana.
10:9 Aza misafidy ny hanana volamena, na volafotsy, na vola ao amin'ny fehin,
10:10 na sakafo ho an'ny dalana, na mitondra akanjo roa, na kapa, na tehina. Fa ny mpiasa mendrika hahazo ny anjarany.
10:11 Ankehitriny, Ary izay tanàna na vohitra dia hiditra, hanontany hoe iza no mendrika ao aminy. Ka mitoera ao mandra-pialanareo.
10:12 Avy eo, raha miditra ao amin'ny trano, dia miarahabà ny ao, nanao hoe:, 'Fiadanana ho amin'ity trano ity.'
10:13 ary raha, tokoa, izany trano mendrika, ny fiadanana dia hitoetra amin 'izany. Fa raha tsy mendrika, ny fiadanana dia hiverina aminao.
10:15 Amen Lazaiko aminareo, it will be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrah in the day of judgment, than for that city.
10:16 Indro, Izaho maniraka anareo tahaka ny ondry ao ampovoan'ny amboadia. Noho izany, ho toy ny hendry tahaka ny menarana, ary toy ny tsotra tahaka ny voromailala.
10:17 Ary mitandrema ianareo noho ny olona. Fa izy ireo no hanolotra anao amin'ny Synedriona, ary hokapohiny ao amin'ny synagogany.
10:18 Ary ianao dia ho entina eo anatrehan'ny mpanapaka sy ny mpanjaka roa noho ny amiko, ho vavolombelona aminy sy amin'ny jentilisa.
10:19 Fa raha hanolotra anao, aza misafidy ny mieritreritra ny fomba na ny zavatra hiteny. Fa inona mba hiteny dia homena anareo amin'izany ora.
10:20 Fa tsy ianao izay ho hiteny, fa ny Fanahin'ny Rainareo, iza no miteny ao anatinareo.
10:21 Ary ny rahalahy hanolotra ny rahalahiny ho amin'ny fahafatesana, ary ny ray hanolotra ny zanany. Ary ny zanaka hitsangana hanohitra ny ray aman-dreny, ary hitondra ny maty.
10:22 Ary ianao no ho halan'ny olona rehetra noho ny anarako. Fa na iza na iza no efa naharitra, hatramin'ny farany, dia izy no hovonjena.
10:23 Ary raha manenjika anareo amin'ny tanàna iray, mandositra ho ao amin'ny iray hafa. Amen Lazaiko aminareo, dia tsy ho reraka ny tanàna rehetra any Isiraely, eo anatrehan'ny Zanak'olona miverina.
10:24 Ny mpianatra tsy mihoatra noho ny mpampianatra, na ny mpanompo noho ny tompony.
10:25 Tsy ampy amin'ny mpianatra, raha tonga tahaka ny mpampianatra azy, ary ny mpanompo, tahaka ny tompony. Raha tsy hoe ny raim-pianakaviana, 'Belzeboba,'Tsy mainka ny ankohonany?
10:26 Noho izany, aza matahotra azy ireo. Fa na inona na inona dia miafina izay tsy haseho, na takona izay tsy ho fantatra.
10:27 Izay lazaiko aminareo ao amin'ny maizina, ambarao eo amin'ny mazava. Ary izay bitsibitsihina aminareo dia tao amin'ny sofina, hitory ambony ny tampon.
10:28 Ary aza matahotra izay mamono ny tena, nefa tsy mahay mamono ny fanahy. Fa raha tokony matahotra Izay mahay mahavery ny fanahy sy ny tena ao amin'ny helo.
10:29 Tsy roa no vidin'ny fody vola madinika kely iray? Nefa tsy hisy anankiray aminy ho latsaka amin'ny tany, raha tsy avelan'ny Rainareo.
10:30 Fa na dia ny volon-dohanareo no efa voaisa avokoa.
10:31 Noho izany, aza matahotra. Ianao fa sarobidy noho ny fody maro ianareo.
10:32 Noho izany, everyone who acknowledges me before men, I also will acknowledge before my Father, Izay any an-danitra.
10:33 But whoever will have denied me before men, I also will deny before my Father, Izay any an-danitra.
10:34 Ary aza ataonareo fa tonga hitondra fiadanana ambonin'ny tany. I tonga, tsy hitondra fiadanana, fa ny sabatra.
10:35 Fa tonga Aho hizara ny lehilahy amin'ny rainy, ary ny zanakavavy amin'ny reniny, ary ny zanakavavy-in-lalàna amin'ny reniny-in-lalàna.
10:36 Ary ny fahavalon'ny olona dia ho ireo ny ankohonan'ny.
10:37 Izay tia ray na reny mihoatra noho ny fitiavany Ahy dia tsy miendrika ho Ahy. Ary na iza na iza tia ny zananilahy na ny zananivavy mihoatra noho ny fitiavany Ahy dia tsy miendrika ho Ahy.
10:38 Ary izay tsy mitondra ny hazo fijaliany, ary manaraka Ahy dia tsy miendrika ho Ahy.
10:39 Na iza na iza mamonjy ny ainy, dia hahavery izany;. Ary na iza na iza no namoy ny ainy noho ny amiko, dia hahazo izany.
10:40 Na iza na iza mandray anao, dia mandray Ahy. Ary na iza na iza mandray Ahy, dia mandray Izay naniraka Ahy.
10:41 Izay mandray ny mpaminany, amin 'ny anaran' ny mpaminany, dia handray ny valim-pitia ny mpaminany. Ary na iza na iza mandray ny marina amin 'ny anaran' ny marina no handray ny hamaliana ny marina.
10:42 Ary na iza na iza no manome, na dia tamin'ny anankiray amin'ireto kely indrindra ireto, dia eran'ny kapoaka rano mangatsiaka hosotroina, fotsiny amin 'ny anaran' ny mpianatra: Amen Lazaiko aminareo, dia tsy ho very ny valim-pitiany. "